Akpa Washout Bag
Line mgbapụta Pipe
Ejima Wall Pipe
Concrete mgbapụta Ejima Wall Ikiaka
Concrete mgbapụta Nkedo n'ikpere aka
Rubber sooks & Dabara Adaba
"Ihe onye na-eme ka ihe sie ike dị elu" nke ihe mkpuchi mkpuchi
Concrete n'elu ike gị n'ụlọnga bụ ụdị mmiri-soluble mmiri mmiri chemical hardening gị n'ụlọnga. Ọ nwere ọdịdị na-enweghị ntụpọ na ọdịdị ihu. Enwere ngwongwo abuo na ihe ndi mejuputara na ahia. Mmetụta ike nke ihe abụọ mejupụtara ka mma ....
"Mpempe ihe nchịkọta dị fechaa" nke ihe eji ewu ụlọ
Mpempe akwụkwọ mkpụkọ ọnụ (LGC), otu n'ime ihe eji ewu ụlọ ọhụrụ, bụ ihe dị fechaa nke ejiri mkpokọta mkpokọta na ihe karịrị 1900kg / m3, nke a makwaara dị ka porous nchịkọta tara akpụ. Fechaa mkpokọta nchịkọta nwere àgwà Lightweight agg ...
Ihe nchikota uzo ihe omuma nke 818 meghere
Na 2018, mmepụta nke mba ahụ ruru ijeri cubic 2.35, na na 2019, ọ ruru ijeri cubic 2.4, na mmụba kwa afọ nke ihe dịka 3.46%. Edebere oriri nke ihe na China maka ụwa karịa afọ iri atọ. Site na 2019, China niile ...
AdreesịNke 9 Jianming M Rd, Mpaghara Hebei, Shijiazhuang, Hebei, China